अन्टार्कटिकामा पाइन आइल्याण्ड ग्लेशियर एक ठूलो पहिरोबाट ग्रस्त छ नेटवर्क मौसम विज्ञान
अन्टार्कटिकाको पाइन टापु ग्लेशियर ठूलो भूस्खलनबाट ग्रस्त छ
क्लौडी क्यासलहरू | | मौसम परिवर्तन
अन्टार्कटिक ग्लेशियरमा अवस्थित पाइन आईल्याण्ड ग्लेशियर दुई सबैभन्दा अस्थिर हिमनदी मध्ये एक हो। यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हिमनदी बाँध हो, र यो सेप्टेम्बर २ ले ठूलो विस्फोटको सामना गर्यो. २ surface267 वर्ग किलोमिटर सतह अलग गरिएको थियो, म्यानहाटनको भन्दा4गुणा आकार। नेदरल्याण्ड्सको डेल्फ्ट टेक्निकल युनिभर्सिटीका जियो साइंस र रिमोट मेजरमेन्टका प्रोफेसर स्टिफ लेरमिटेका अनुसार विशाल आइसबर्ग अन्टार्कटिक महासागरबाट पार भएर पछि थुप्रै बरफ टापुहरूमा टुक्रिएको थियो।
घटना हिमनदी भित्रको आन्तरिक पतनको परिणाम हो। पाइन टापु दुई हिमनदीहरु मध्ये एक हो जसलाई अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन् कि द्रुत गिरावटको बढी सम्भावना रहेको छ, लेयर भित्रबाट समुन्द्रमा बढी हिउँ ल्याउँछ। प्रत्येक वर्ष हिमनदीले ,45.000 2009,००० मिलियन टन बरफ गुमाउँछ। २०० Since पछि, त्यहाँ भइसकेको छ यस हिमनदीको दुई विशाल भूस्खलन। २०१ 2013 मा एउटा र २०१ 2015 मा। यो अन्टार्कटिका को कुल पिघलनाको एक चौथाईको लागि पनि जिम्मेवार छ।
1 तपाईं यी सबै पग्लिनबाट के आशा गर्न सक्नुहुन्छ?
1.1 जोखिममा सागर ट्रान्सपोर्टर बेल्ट
तपाईं यी सबै पग्लिनबाट के आशा गर्न सक्नुहुन्छ?
महिनौंसम्म अन्वेषकहरूले पहिरोको पहिरोको जोखिमको बारेमा चेताउनी दिएका छन्। हिमनदीको पग्लनेले विश्वभरको समुद्री तटलाई बाढी दिन सक्छ। दक्षिण ध्रुवलाई ध्यानमा राख्दै, अन्टार्कटिकमा, संसारमा 90 ०% बरफ समावेश गर्दछपृथ्वीमा "ताजा पानी" को 70०% थपको अतिरिक्त, यो अनुमान गरिएको छ यसको पूर्ण विगलनले समुद्रको सतह 61१ मिटरले बढाउछ। भन्नु आवश्यक छैन कि त्यो विनाश हुनेछ।
यो रातोरात हुन सक्दैन। पिघलना क्रमशः तर निरन्तर हुँदैछ, यो बन्द हुँदैन। वर्षभरि, चिसो मौसममा यो स्थिर हुन्छ, र तातो मौसममा यो पग्लन्छ। समस्या त्यो हो यसले उत्पादन गर्ने बरफ भन्दा बढि पिउँछ, र बढी जान रोक्दैन, हामीलाई घटनाहरू जस्तै हातमा खबर छोड्दै। तथ्य यो हो कि ग्लोबल वार्मिंगले प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको छ, र अन्टार्कटिकको औसत तापक्रम--º डिग्री सेल्सियस भए पनि पिघलना क्रमशः मात्र होइन, यो झन झन प्रगतिशील हुँदै गइरहेको छ।
यसको समुह सतहको बृद्धिमा हुनसक्ने प्रभाव बाहेक, यो त्यहाँ अन्त हुँदैन। यसले समुद्री जल प्रवाहहरू परिमार्जन गर्दछ जसले "सागर ट्रान्सपोर्टर बेल्ट" भनेर चिनिने असर गर्दछ।
जोखिममा सागर ट्रान्सपोर्टर बेल्ट
यो ठूलो बेल्ट महासागरहरूको पानीको एक ठूलो प्रवाह हो तापक्रम को पुनः वितरण वितरण गर्दछ। चिसो पानी भूमध्यरेखामा जान्छ, जहाँ यो ताप्छ। उच्च तापक्रम, कम वजन यसको छ र यो पानी यस धारामा चल्छ। कम तापक्रम, कम यो यात्रा। तापक्रममा आएको परिवर्तनले महासागरहरूमा जीवन पनि योगदान पुर्‍याउँछ, र त्यो निश्चित भूमि क्षेत्रहरूले केही मौसमको आनन्द लिन सक्दछन्।
ध्रुवहरूको कुल पग्लने क्रममा, समुद्री ट्रान्सपोर्टर बेल्ट गायब हुन्छसेरिया प्रवाहहरू प्रभावित हुनेछन्, र हावाहरू पनि। यदि यो बन्द भयो भने हुने हुने पहिलो परिणामहरूमध्ये एउटा कोरल कसरी मर्दछ भनेर देख्न सकिन्छ। ठूलो समुद्री इकोसिस्टममा उनीहरूको महत्त्वले जीवनमा विनाशकारी प्रभाव पार्छ। यो डोमिनो प्रभावको परिणाम हुनेछ, किनकि कोरलहरू अन्य धेरै जीवहरूको लागि जीवनको आधार हो, र अन्य जीवहरूसँग सिम्बियोसिस पनि। तिनीहरूसँग तापमानमा परिवर्तनको अनुकूलताको मार्जिन धेरै सानो छ। त्यसोभए तिनीहरूको बासस्थान जहिले पनि पानीको तापक्रम कम्तिमा पनि २० सेन्टिग्रेड र अधिकतम º० डिग्री सेन्टिग्रेडको बीच चल्छ।
यो त्यस्तो भएको पहिलो पटक हुनेछैन, र यिनै कुराहरुमा यस विषयमा धेरै बहसहरु भए कि यो ग्लोबल वार्मिंगको कारण मानिसबाट आएको हो वा ग्रहको आफ्नै चक्रको हो। पछिल्लो समय यस घटनाको रेकर्डहरू छन् १ 13.000,००० वर्ष पहिले। अन्तमा, यो ग्रहको आफ्नै चक्र हुन सक्छ र मानवले यसलाई द्रुत पारेर आफ्नो छाप छोडे। जे भए पनि, केहि थाहा छ कि मानव को लागी सारा संसार को लागी प्रभावित छ। त्यहाँ धेरै प्रमाणको अनुहारमा कम र कम छलफलहरू छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » अन्टार्कटिकाको पाइन टापु ग्लेशियर ठूलो भूस्खलनबाट ग्रस्त छ
जब वर्षा डरलाग्दो चलचित्रबाट आएको देखिन्छ